J.B. Danquah - Wikipedia
Joseph Kwame Kyeretwie Boakye Danquah yɛ Ghana panyin baako a wɔampene Kwame Nkrumah aban wɔ bere a Ghana nyaa faahodie ekyi no. Na ne mfɛfo frɛ no Nana Kwame Kyeretwie.
Wɔwoo Danquah wɔ Bempong wɔ Akanman mu. Na ɔyɛ ɔdehye a ofi Ofori Panyin fie a saa bere no wɔyɛ ɔman Ghana ameneɛkuw nhyehyɛe nnipa titiriw. Danquah kɔɔ London suapɔn na hɔ na osuaa abakɔsɛm ne felɔsɔfi. Ɔyɛ obibini a odi kan a suapɔn no maa no DOCTRATE a wɔ abakɔsɛm mu.
Ɔsan baa Ghana (saa bere no na wɔfrɛ no Gold Coast) wɔ afe 1927 mu. Ne tema a ɔwɔ ma Ghana kɔɔ soro yiye na ɔne Ghana panyin baako saa bere no a yɛfrɛ no Owura J.E. Casely Hayford faa ayɔnkoɔ. Casely Hayford na ɔteee kuw a wɔfrɛ no National Congress of British West Africa. Afe 1930 mu no, Casely Hayford yaree na ansa obewu no, ɔfrɛɛ Danquah na ɔka kyerɛɛ no sɛ ɔnhwɛ abibiman nyinaa faahodie so. Mmom na Danquah mfa abibiman a wɔka borɔfo kasa wɔ West Africa nkabom adwen a na Casely Hayford wɔ. Nso no, na ɔmpɛ sɛ ɔde ne ho bata aman a wɔnka borɔfo no ho eefisɛ na Danquah gye di sɛ wɔde wɔadwen ne wɔn nneyɛe fa aborɔfo no kwan a wɔnnyɛ nneɛma te sɛ nea abibifo yɛ no. Eyi nti Danquah faa adwen sɛ ɔbɛhwɛ Ghana faahodie nnwuma so.
Danquah dahuruubɔ krataa a ɔfrɛɛ no "The Times of West Africa" fi 1930 kosi 1935 mu. Krataa yi ne dahurubɔ krataa a eedi kan wɔ Ghana. Ɔde ne ho hyehyɛɛ nnwuma pii a wɔfa amanyɛsɛm ho wɔ afe 1930 ne ekyi. Eyi de no kɔɔ Britainman mu wɔ 1934. Fi 1934 kosi 1937 no, na ɔyɛ Nsɛnkyerɛwni-Panin wɔ "Gold Coast Youth Conference".
Danquah bɛyɛɛ mmrahyɛbedwani wɔ 1946 mu na ɔhwehwɛɛ kwan a wɔbɛhyehyɛ mmra ɛbɛboa ama Ghana enya faahodie. Ɔboaa sɛ wɔbɛtew kuw United Gold Coast Convention. Bere a Kwame Nkrumah fii amanɔne bae no, ɔdanee kuw no yɛɛ amanyɔkuw. Wɔ 1946 mu no, tumi ho mansotwe kakraa tuu UGCC ase na Nkrumah tew ne ho kɔtew Convention People's Party (CPP). Wɔde Danquah ne Nkrumah kɔɔ fie ase wɔ 1948 mu, na eyi maa amanfo nyinaa de obuo maa wɔn. Wɔsan tow aba paw Danquah kɔɔ mmrahyɛbedwa nkyekyɛmu abien a wɔbɛyɛ "House of Representatives" ne "House of Elders". Eyi amma so saa no, Danquah annonyam nyinaa brɛɛ ase. Abatoɔ a ɛbaa so wɔ 1954 ne 1956 mu nyina ankɔ yiye amma no.
Ghana nyaa faahodie wɔ 1957 mu. Danquah san kɔɔ ɔmanpanyin abatoɔ a ɔne Nkrumah na wogyinae wɔ afe 1960 mu. Nkrumah dii nkunin na 1958 mu no wɔde Danquah san kɔɔ fie ase. Afe baako ekyi no, woyii no. Ɔbɛyɛɛ Ghana Bar Association ne dwumapanyin na wɔsan de no hyɛɛ fie ase wɔ 1964 mu. J.B. Danquah hwere ne nkwa wɔ fie ase na aban no annyɛ nhyehyɛe biara antew n'anim sɛ ɔmanba titiriw.
Danquah kyerɛw nhoma abien wɔ Akanfo mmra ho a wɔde "Gold Coast Akan Laws and the Akim Abuakwa Constitution (1928)" ne "Akan Doctrine of God (1944)"
Retrieved from "https://ak.wikipedia.org/w/index.php?title=J.B._Danquah&oldid=18956"
This page was last edited on 26 Ɔpɛpɔn 2017, at 16:22.